Doorashada Soomaaliya Maku Qabsoomi Kartaa Xilligeeda ? | Salaan Media
Doorashada Soomaaliya Maku Qabsoomi Kartaa Xilligeeda ?
May 27, 2020 | Published by: Hamse
– In muddo ahba waxaa isasoo tarayay walwal ku saabsan in saameynta coronavirus ay taabato jadwalka doorashada Soomaaliya.
Midowga ayaa walaac ka muujiyay in dib loo dhigo doorashada dalka Soomaaliya ka dhici doonta.
Wakiilka EU-da ee Soomaaliya Nicolas Berlanga ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka waxa uu ku sheegay in Midowga Yurub ay ka walaacsan yihiin cawaaqib xumo ay suuragal tahay inay ka dhalato taariikhda cusub ee loo qabtay in guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya ay hor tagto Baarlamaanka Federaalka.
Wasiir ku xigeenka Arrimaha dibadda ee Talyaaniga Emanuela Del Re ayaa sheegtay in xilligan oo ay jirto xaaladda safmarka corona uu waddan kasta la imaan karo go’aanno saameyn weyn abuuri kara.
Waxay hoosta ka xariiqday in dalkeeda Talyaaniga uusan faragalineynin go’aannada ay dalalku gaaraan, islamarkaana dal kasta uu u madax bannaan yahay inuu go’aan qaato xilligan adag.
“Waxaan dhihi karaa in xilligan lagu jiro xaaladda deg-degga ah ee Covid-19 looga baahan yahay in waddamada ay go’aannadooda caalamiga ah qaadan karaan, taas oo dabcan aannaan annagu faragalin karin. Sidaas darteed waa inaan ixtiraamnaa go’aannada kasoo baxa waddamada, hoggaamiyeyaasha iyo dowladaha gartay inay qaadaan tallaabooyin ay ku wajahaan xaaladdan,” ayey tiri.
Emanuela Del Re ayaa dhanka kale sheegtay in dood noocaas ah ka jirto midowga Yurub dhexdiisa.
“Waad ogtahay xitaa Yurub waxaa jirta dood ku aaddan arrintan, waayo guud ahaan waan ognahay in Covid-19 uu hab cusub u baddalay nolosha qof walba. Waxaan ku khasban nahay inaan dib u dhigno munaasabado badan, tusaale ahaan waxyaabihii ugu xiisaha badnaa – sida ciyaaraha olombikada – balse intaasoo kaliya ma aha, waxaa jiray munaasabado ku saabsan Afrika oo aan dooneynay inay dhacaan sanadkan, laakiin ma sameyn karno waxaana dib u dhigeynaa ilaa sanadka xiga, taasina micnaheeda ma aha inay rajadeennu lunto.”
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh ayaa BBC-da kala hadlay walaac laga qabo in dib u dhigista furitaanka kalfadhiga Baarlamaanka ay horseeddo dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya.
Waxaanu Xukuumada Uga Digayna In Ay Shirkado Gaar Ah Ku Wareejiso Solar Ka Ay Dawlada Imaaradku Ugu Deeqday Gobolka Saaxil “Xisbiga Waddani”
Goday Oo Laga Xusay Sannad Guuradii 10-aad Ee Ururka ONLF
Waxaan Leeyahay Aynu Iska Dulqaadano Saamigeena Waynu Heliye “Boqor Axmed Iimaan Warsame”
Ciidanka Shiinaha Oo Dhoolatus Ka Sameeyay Meel Aan Ka Fogayn Badaha Somaliland
Golaha Wakiilada Oo Ansixin Doona Kootada Haweenka Iyo Dadka Laga Tirada Badanyahay
Burco:Ciidanka Boliiska Oo Soo Qabtay Khamri Tiro Badan
Deg Deg:Tubaakadani Waxay Caafimaad Darro U Keenaysa Dadka Iyo Dalka” Gudoomiyaha Ha’ayada Dhawrista Tayada”
Wasaarada Horumarinta Caafimaadka Somaliland Oo Shaacisay Kiisas Cusub Oo Laga Helay Caabuqa Karoona
Wasiir Hore Cabdi samad Macalin Oo Ka Warbixiyay Shirka Maamul Goboleedyada Ee Dhuusa-Mareeb
Dab Xoogan Oo Ka Kacay Magaalada Dhuusa-Mareeb